Zimbabwe Aims to Host Miss Curvy Africa - allAfrica.com
Zimbabwe Aims to Host Miss Curvy Africa
The pageant founder Mercy Mushaninga is aiming to host Miss Curvy Africa after being inspired by curvy women who were interested in modelling.
Zimbabwe: Miss Curvy Africa Preps Gather Momentum
The Herald, 16 January 2013
Organisers of Miss Curvy pageant announced this week that preparations for the continental Miss Curvy Africa are underway. Mercy "Catwalk" Mushaninga, the brains behind the beauty… Read more »
Miss Curvy Zimbabwe 2012
Zimbabwe: Miss Curvy Africa On the Cards
Zimbabwe Standard, 28 October 2012
The success of this year's Miss Curvy beauty contest has given pageant founder Mercy Mushaninga new wings to fly to a higher level. Read more »
Zimbabwe: Miss Curvy Getting Bigger and Better
The Herald, 23 October 2012
Strange as it might seem, the much hyped Miss Curvy 2012 won by Mildred Shumba, an A-Level student, is growing with each year and many big women take it seriously just like any… Read more »
Zimbabwe: Miss Curvy Contest on Tonight
The Herald, 19 October 2012
It's on tonight! The Miss Curvy pageant is a contest that focuses on women with round figures. Eighteen contestants will battle it out to be crowned Miss Curvy at Rainbow Towers… Read more »
Zimbabwe: Curvy and Proud - Over 50 Register to Strut Their Stuff
Zimbabwe Standard, 24 June 2012
Over 50 women from across the country have already registered for this year's Miss Curvy Zimbabwe which is set to take place in Harare on October 20. Organiser of the event, Mercy… Read more »